Atataovy ... - Dox - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Atataovy ... - Dox
Atataovy aho ,rey olona ,fa mavesatra ny anjarako
E!Malama anie 'ty lalako ka tsisy amaharako
Kotsan'ny fitiavana aho,kotsakotsa mahonena
Ho dify ihany ilay malala, toa dia vatranao jerena
Atataovy aho ,rey olona, sao dia raraka tsy fidiny
ny fitia nisahiranako,ka dia hahitako ngidiny
Ny felan'ny tatamo ve hahatondrako rano mody?
Ny hetahetako avy eto dia tsy hisy fanafody
Atataovy aho, rey olona, tokana ity siny ity
Raha ho montsamontsana eto, hoentiko aiza ny fitia?
Mitondra tanam-polo mody, mangaina sy mangaihay
Atataovy aho, rey olona, sao tsy tratrako iry havako
Mahazo ankodimirana izy ka manahy ny fitiavako
sao tsy hahatratra azy... He 'ty elanelanay!!!
Sokajy : Ahiahy, fiainana, Fitiavana, Fitiavana
zakilinina (29/11/2004 22:31:02)
Asa raha tsapanao fa rehefa mamaky an'ity tononkalo ity ianao dia toy ny mihira. Izay no anisan'ny mahasamy hafa ny tononkalo sy ny tononkira. Ny tononkira dia ialaina asiana feony na zava-maneno vao ho azo hiraina. Ny tena tononkalo indray dia efa hira avy hatrany noho izy entanin'ny gadona tsara rafitra sy maty paika.
Tsy ampy mihitsy ny isa 5 hitsaràna an'ity tononkalo ity. Gaga aho teo nijery ny antsipirihany amin'ny isa azony fa nahita isa 1. Tsy azoko mihitsy satria betsaka ireo tononkalo tsy kanto ato no mahazo isa 5 !
Miarantsoa (07/12/2004 16:39:03)
Izaho koa ry zakilinina dia tena mba gaga mihintsy amin' ny fomba fitsarana ny tononkalo eto : misy tonokalo tena mandresy lahatra avy hatrany fa kanto nefa mahazo isa 1 araka ny nambaranao; misy koa mandresy lahatra avy hatrany fa tsy kanto nefa mahazo isa 5.
mandresy lahatra antsika mpamaky aho ,sy ny mpanoratra ihany koa :
raha te handroso.... maneke toro- hevitra na koa fanankianana ary mba miezaha hoe mitsara araka ny tena ao am- ponao !
tsarfanah (12/12/2004 07:39:12)
ie tsara izany fa misy ny olona dia manatebaka sy tsy manaja ny mpanoratra koa eto. fa izao anie ny olana e ny olona mahita fa tsara ilay tononkalo tsy manome isa 5 fa mandalo fotsiny e dia aiza moa tsy izay misopasopa sy ny tsy mahay mitsara indray no manjary manome azy isa 1 no manome isa ratsy azy ka aza atao mahagaga zany e
vetsoko (13/12/2004 19:09:31)
Aza mba atao mahagaga ry ireto ny hevitra tsy mitovy a!
1 etre= 1 opinion,jamais uniforme c'est la loi de la différence
lanto (14/12/2004 12:05:18)
Rah ny tenaizy tsy misy point azo omena ny mpanoratra tahaka itony. Iza moa isika no afaka hanome naoty azy ? Ny fankafizana no mety tsy mitovy , hoy ilay namana mpanoratra ato iray izay. Nefa hanome naoty ihany aho fa dia mahakivy ny ataon'ireo sasany voalazan'i tsarfanah.
talivanamay (12/11/2005 11:44:58)
Marina avokoa ny filazanareo fa betsaka ny tsy mihevitra ny votoatiny fa ny firindrany fotsiny, koa aza taitra raha misy manome isa iray satria tsy tsapany ilay aingam-panahy narindran'ny mpanoratra taminy.
all (21/04/2008 17:18:47)
kanto dia kanto ilay tononkalo, talenta tokoa ny an'i Dox ka tsara rindra ilay izy
gasyjean (12/06/2009 19:51:10)
Tsara, kanto ,meva.mahafinaritra.
mpisotrtoaka (27/10/2014 14:28:03)
"ATATAOVY" no izy ry Dad fa izany ataotaovy izany tsy fiteny malagasy a !
Mpanoratra : Dox
Nampiditra : Dad
Daty : 28/10/2003
Mpamangy : 15107
Mankafy : 22
Fa fitiavako hianao
Rivotra aza aho...